Umnxeba wokuNikezela ngeCompact, umgca wokuThintela ukuPhela kwePellet, umgca wemveliso yokuxhasa evela kuMvelisi waseChina
Inkcazo:Umgca wokuDityaniswa kweCompact,Umtya wePellet wokuCoca,Umxhasi we-Decoiler Leveler,Umgca wokuDibana kweSakhiwo,Imigca yokuSondeza uMbane kuMbane,3 Koku-1 uNc Servo uMxhasi
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla
Iintlobo zeMveliso ze- Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Umgca wokuDityaniswa kweCompact , Umtya wePellet wokuCoca ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Decoiler Straightener ene-Servo feeder Line  Qhagamshelana Ngoku
Isisondli se-decoiler ngqoener yeenxalenye zeesoftware  Qhagamshelana Ngoku
Isikhuseli sokuzonwabisa esingazifakwanga  Qhagamshelana Ngoku
Umgca wokuThintela ngokuNgena kwiVenkile  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weLoop yokulawula ukugoba ngokuthe tye  Qhagamshelana Ngoku
Ikhoyili Straightener-Isondla-3 Ku-1  Qhagamshelana Ngoku
Isixhasi se-Decoiler straightener yezinto ezinokungqinelana  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokutyisa i-Decoiler kumatshini ozenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamanqaku ezithuthi  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer 3 Kumatshini omnye  Qhagamshelana Ngoku
Umzenzisi we-decoiler straightener feeder  Qhagamshelana Ngoku
Umtya wokuThintela i-Coil wokufaka isitampu ngokuzenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
ICandelo lokuThintela ukuHamba kweCompact  Qhagamshelana Ngoku
ICandelo leKhonkco leKhonkco leKhonkco  Qhagamshelana Ngoku
Umtya weCity weCoil  Qhagamshelana Ngoku
Umgangatho ophezulu wokutya oshidiweyo  Qhagamshelana Ngoku
Umgca wokuThintela ukuKhangela kwiCompact  Qhagamshelana Ngoku
I-Metal Coil Power Press iNc Servo Roll feeder  Qhagamshelana Ngoku
I-Decoiler eyi-compact kunye ne-feeder Straighteners zoNcedo lweNgxelo zoKhuseleko  Qhagamshelana Ngoku
Cinezela ukuHambisa isiXhobo sokuNgqisha  Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo zoKondla i-SmartSaver Coil feeds zezinto ezinamandla aphezulu ziyilelwe ukwenza isitya esinobunzima obunamandla obunzima obungaphezulu kwe-400Mpa. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Bona afaneleka...
I-DEC OILER STRAIGH TENER KWI- FE VO FEEDER L E E I-Decoiler Straightener ene-Servo feeder Line yokucwangcisa idizayini idibanisa i-feeder / i-straightener ene-decoiler enegesi. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo...
Isisondli se-decoiler ngqoener yeenxalenye zeesoftware
Deco ILER STRAIGHTENER ezingena kweyona migaqo mikhulu iinxalenye Hardware sokunyathela Isifinyezi se-Decoiler straightener esisebenzayo sokugcina isitampu sogcino sidibanisa i-feeder / i-straightener ene-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack...
I-AUTO UNC OILER LEV ELER FEEDER Uyilo lokugcina olusa i-leveler feeder luhlanganisa idibanisa / feedener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops...
I-AUTO PRE SS FEEDER LINE Auto Press Ukondla Line ukonga uyilo idibanisa a feeder / straightener kunye decoiler ngamandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo...
ILOOP CO NTROL STRA I GHTENER uMondli Uyilo loLondolozo lweLight lover Straightener luhlanganisa idibanisa / feedener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa...
Coil STR AIGHTENER ezingena kweyona migaqo mikhulu 3 NGO 1 I-Coil Straightener-feeder 3 Kwisitayile esi-1 sokugcina uyilo luhlanganisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle,...
Deco ILER feeder mac Hine FOR IZINTO TEN nokuci- Ophezulu Isixhasi se-Decoiler ngqoener feeder ye-tension ye- space tension design idibanisa i-feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle,...
I-DEC OILER FEEDER MACHI NE ye-AU YENKCAZO YOKUGQIBELA Decoiler feeder machine iinxalenye auto bexhentsa s uyilo ukonga isantya idibanisa a feeder / straightener kunye decoiler ngamandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle,...
IiBhalbhu FE Edere Ilayini Zemoto sokunyathela Umgca weCompact yokuLungiselela iinxalenye ezizenzekelayo isitampu sokugcina uyilo sidibanisa i-feeder / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi...
Deco ILER STRA IGHTENER feeder KOMATSHINI 3 NGO 1 Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer 3 Kwindawo enye oomatshini bokugcina uyilo luhlanganisa i-feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi...
EZIZENZEKELAYO uDEC OILER STRAIG HTENER uMondli Isithambisi esisebenzayo sokukhusela i-decoiler straightener yesitampu sokugcina isitampu sokugcina isitena sidibanisa i feeder / i -enerator kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack...
ICOIL F EEDING LI NE YOKUQHUTYWA KOKUGQIBELA Lo mtya wokuKhambisa i-Coil wokugcina isitampu sokugcina indawo uhlanganisa idibanisa / i-straightener kunye ne-decoiler enikwe amandla. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa...
Olu candelo lweCompact Press Feeding Line lokugcina uyilo luhlanganisa idrafti / i-straightener kunye ne-decower yegesi. I-loop ye-slack iphuhliswa ngaphantsi kwe-spindle, ukunciphisa indawo yomgangatho ngokuthelekiswa ne-loops eqhelekileyo...
Imigca yokuCoca i-Coil Lines yenzelwe ngokukodwa ukuphatha i-coil stock kwindawo yokugcina inyawo. Umtya weCrafact Coil ubandakanya i-uncoiler engasebenzisi moto, i-servo elawulwa ngokuthe ngqo / isondli kunye nemoto yokulayisha i-coil. Ukulayisha...
Umtya weCity weCoil Ayifuni iluphu kunye nomhadi kuba i-coil ibekwe ngaphezulu komqeshi kunye neendlela zokondla . Umgca wecompact unezakhono ezifanayo ezifanayo kunye nomgca oqhelekileyo kodwa uhlala kwindawo encinci yomgangatho kwaye, rhoqo,...
Iinyibiliki ezincinci ezinamandla angaphezulu okuqina zifuna ukhathalelo olukhethekileyo kwinkqubo yokubamba iikhoyili . Ukhuseleko, ubomi obude kunye ne-ergonomics zibaluleke ngakumbi kunokondla. Ukongeza, isakhelo somatshini kufuneka sinyamezele...
Umgca ingakumbi Zenzekelayo Ukondla ngci wenziwa iiyunithi eziphambili ezimbini: iyunithi feeder-straightener kunye unit uncoiler. Zombini aba matshini baphumla kwisiseko sokudibanisa i-welded. Iyunithi ye feeder-straightener idityaniswe ngqo...
Uluhlu lweemveliso zethu luqonda imigca yokutya egcwele kwikholeji eqhelekileyo kunye noyilo lwe compact, yokondla kwezinto zekhoyili koomatshini bokushicilela kunye nemigca yokufaka profiling. Phezu kwesicelo sakho sikulungele ukukwenzela...
ICoquo Decoiler kunye noMondliyo weStraightener Press Press e-Eed Systems inikezela kubathengi uluhlu olupheleleyo lwemveliso phantse kuzo zonke izicelo ngaphakathi kwestampu seshiti yeshiti kunye nomzi mveliso wokwenza intsimbi. Nge- Compact...
Cofa umgca wokuhambisa isitampu wokuhambisa isitampu unika abathengi uluhlu olupheleleyo lwezinto ezityiwayo zokondla izinto zekhoyili koomatshini bokushicilela, abagubungela phantse nayiphi na imfuneko. Uluhlu lweemveliso luqonda ukuba uluhlu lutya...
KwiChina Amandla oNcedo lwensimbi ephezulu yamandla Abaxhasi
Iinyosi ezincinci ezinamandla angaphezulu okuqina zifuna ukhathalelo olukhethekileyo kwinkqubo yokuPhatha i- Coil . Ukhuseleko, ubomi obude kunye ne-ergonomics zibaluleke ngakumbi kunokondla. Ukongeza, isakhelo somatshini kufuneka sinyamezele ngokukodwa i-torque ephezulu kunye namandla eewashi.
Umgca wokuDityaniswa kweCompact yamandla aphezulu e-materia l yenzelwe ukwenza iinyibiliki ezinamandla anamandla aphezulu okuqina ngaphezulu kwe-400Mpa. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu. Zikulungele ngokufanelekileyo ukwenziwa kwamacandelo okwakha kunye nokusebenza kwezinto ezinamandla, kwanakwiindidi eziphezulu zokuqinisela. Kwiinkqubo zethu coil ngci unako ukusebenza ububanzi izinto coil ukusuka 400mm ukuya 1800mm, coil okusuka 0.6-9.0mm, ubunzima coil ukuya 25000kgs.
Ngokwesiqhelo imoto yeCoil, decoiler straightener NC servo feeder 3 kwindalo 1 , umgca omfutshane & ugcine indawo yomzi mveliso.
Umgca wokuDityaniswa kweCompact Umtya wePellet wokuCoca Umxhasi we-Decoiler Leveler Umgca wokuDibana kweSakhiwo Imigca yokuSondeza uMbane kuMbane 3 Koku-1 uNc Servo uMxhasi Umtya wokuDibanisa iCompact Umgca wokuThintela ukuNgqinelana kweCompact